Nyazvi Dzinoti America Yave Kuratidza Kuti Haina Muti Unoyera Sanhu paVatungamiri veNyika Vanoda Kurambira paChigaro
Mbudzi 26, 2020
Vamwe vanhu vanoti vachave mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden vachave nebasa guru rekugadzirisa zvakawanda zvakavhiringidzwa naVaDonald Trump vachitiwo Zimbabwe ine zvekudzidza zvakawanda kune zviri kuitika munyika yeAmerica.
Chimwe chizvarwa cheZimbabwe chave kugara kuSweden uye chiri kanzura VaTichaona Maphosa chizvarwa chinoti kunyange hazvo VaTrump vachionekwa sevakakonzeresa kupatsanuka kwevanhu vemuAmerica, zviri pachena kuti vange vaine vatsigiri vakwanda.
VaTrump vakawana mavhoti anodarika mamiriyoni makumi manomwe nematatu kana kuti 73 million. Asi VaBiden vakawa mutungamiri wekutanga kudarika mavhoti mamiriyoni makumi masere kana kuti 80 million munhoroondo yeAmerica.
VaMaphosa vanotiwo kunyange hazvo VaBiden vaine basa rakawoma rekugadzirisa zvinhu, vanoona sekuti vachabudirira vachiti vanhu vavari kusarudza semakurukota vanhu vanoremekedzeka.
Boka reGeneral Services Administration rakatozivisa kuti basa rekuchinjwa kwemutungamiri wenyika rinofanirwa kuenderera mberi zviri pamutemo, uye VaBiden vakatodoma makurukota mashanu pane makurukota gumi nevashanu avanofanirwa kudoma.
VaMaphosa vanoti Zimbabwe ine zvakawanda zvekudzidza kubva kune zviri kuitika kuAmerica. Vachipawo maonero avo panyaya imwe chete, chimwe chizvarwa chiri muAmerica Dr Simbiso Ranga vabvumawo kuti VaBiden vane basa guru rekuyananisa vanhu muAmerica.
Dr Ranga vati VaBiden vachamanikidzwa kushanda pamwe chete nebato remaRepublicans sezvo riine vamiriri vakawanda mudare reSenate parizvino pasati paitwa sarudzo mbiri dzakakosha dzesenate kuGeorgia muna Ndira idzo dzichajekesa kuti ndiyano anenge aine maseneta akawanda pakati pemaDemocrats nemaRepublicas.
Asi vati vanofunga kuti VaBiden vachabudirira nekuti vane nhoroondo yakareba mune zvematongerwo enyika. Dr Ranga vatiwo chimwe chezvidzidzo zvikuru zvinogona kuwanikwa neZimbabwe kubva kune zviri kuitika muAmerica inyaya yekuti masimba ezvematongerwo enyika anofanirwa kuve mumaoko everuzhinji.
Asi nhengo yeboka reCentral Committee mubato reZanu PF VaJoseph Tshuma vaudza Studio 7 kuyi hapana zvingadzidzwa neZimbabwe kubva kuAmerica vachiti zvakaitika munyika iyi zvinoratidza kuti nyika imwe neimwe ine mafambisiro ainoita sarudzo dzayo pasina vamwe vanopindira.
VaBiden vanotarisirwa kutora mhiko musi wa 20 Ndira gore rinouya kuve mutungamiri wechimakumi mana nemasere wenyika yeAmerica.
VaTrump vakatenda havo kuti chikwata chaVaBiden chitange gadziriro asi vari kuenderera mberi vachiti vari kupikisa zvakabuda musarudzo kumatare kunyangwe matare ari kurasa nyaya zhinji achiti hapana humbowo hwavari kupa. Asi pamutemo vanogona havo kusatambira sarudzo asi vachingosiya chigaro zvakadaro.
Nyaya Ina Kudzanai Musengi
VaMangudya Vanoti Mutemo weStatutory Instrument Wakanangana neNhubu Chete
Vakawanda Vanocherechedza Zuva reVana muAfrica, Day of The African Child
Hurumende Yokurudzirwa Kuvhara Zvikoro Sezvo Huwandu hweVanhu Vane Covid-19 Hwakwira Zvakare
Mutori weNhau weNew York Times, Jeffrey Moyo, Anoburitswa Mujeri
\_VaNeville Mehluli Mchina Voshandura Nzira dzeKuchengetedzwa kweChikafu